बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल ललितानिवास प्रकरणमा कसरी जोगिए ? – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जगगा व्यक्तिको नाममा गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुबाट भएका गैह्रकाननूनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने प्रस्तावमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रपरिषदबाट निर्णय भएको पाइएको छ ।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एसिया बैंकबीच सम्झौता, बीमा शुल्क भुक्तानीमा सहज हुने